News Collection: सर्लिन र सनीमध्ये को 'हट' ?
सर्लिन र सनीमध्ये को 'हट' ?
मुम्बई, फागुन १३ (एजेन्सी) - सर्लिन चोपडाले आफू पोर्न स्टार सनी लिओनभन्दाबढी 'हट' र कामुक भएको दाबी गरेकी छिन्। महेश भट्टको चलचित्र जिस्म २ मा आफूले सनीको तुलनामा राम्रो अभिनय गर्न सक्ने तथा आफ्नो कामुक शैलीले दर्शकलाई भुतुक्कै पार्न सक्ने बताएकी छिन्।
तर धेरैको विचारमा उनलाई अहिले नै सनीसँग तुलना गर्न मिल्दैन। किनभने सनीको अहिलेसम्म कुनै चलचित्रमा काम गर्ने अवसर पाएकी छैनन्। सनीको दुई तीन चलचित्र प्रदर्शनमा आएपछिमात्र को बढी हट भएको र कसको अभिनय राम्रो भएको भन्न सकिने छ। सनीको अभिनय नहेरीकिन शर्लिनले कसरी आफूले उनीभन्दा राम्रो अभिनय गर्ने दाबी गर्न सक्छिन्? धेरैको प्रश्‍न छ।
सर्लिनको थुप्रै चलचित्र रिलिज भइसकेका छन्। तर चलचित्र भवनमा उनका फिल्म हेर्न निकै कम दर्शक पुगेका थिए। अङ्गप्रदर्शनका आधारमा केही चलचित्र पाइए पनि उपल्लो स्थानमा पुग्न सजिलो नहुने कुरा सर्लिनले बुझ्न आवश्‍यक छ। कसैकसैले त सर्लिनको यो भनाई सनीको नामलाई प्रयोग गरेर चर्चामा आउनका लागि भएको बताएका छन्।
वास्तवमा सर्लिन, पुनम पाण्डे र मल्लिका सेरावत अहिले सनी लिओनले पाइरहेको प्रचार प्रसारबाट आत्तिएका छन्। यिनीहरूलाई मन पराउनेहरूको मन मस्तिष्कमा अहिले सनी लिओनको जादू भरिएको छ।
सनीको अहिलेसम्म कुनै पनि चलचित्र रिलिज भइसकेको छैन। तर पनि उनलाई मन पराउनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो नै छ। यसैलाई हेरेर पनि सर्लिन र पूनमले आफ्ना कामुक तस्बिर टि्वटरमा राख्ने थालेका छन्।